Iziphesheli zeTronsmart zeSikhumbuzo se-10th se-Aliexpress | Izindaba zamagajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | | Izipikha, Gadgets, General
Kusasa kunjalo usuku olubalulekile emhlabeni wokuthenga nge-inthanethi. I-Aliexpress, ipulatifomu yokuthenga online edume kakhulu evela eChina igubha iminyaka engu-10 yasungulwa. Iminyaka eyishumi egcwele yokusebenza, okuzogubha ngokunikezwa okungakholeki. UTronmart ujoyina lo mgubho futhi isiletha emikhiqizweni emithathu enesaphulelo ongeke uyiphuthe.
Uma ubufuna isikhathi ukuthola igajethi ehlobene nomculo Awukwazi ukuphuthelwa lo mcimbi. UTronmart futhi usimema ukuthi sigubhe iminyaka engu-XNUMX ye-Aliexpress futhi sinikele ngokunikezwa kwayo okuthile. Iminyaka eyishumi yokuthengisa imikhiqizo ihamba ibanga elide. Uma ufuna ukujoyina iqembu bheka iziphakamiso esikulethela zona.
1 Isaphulelo esingaphezu kuka-40% kumikhiqizo yeTronsmart
1.1 I-Tronsmart Onyx Ace
1.2 I-Tronsmart T6 Plus
Isaphulelo esingaphezu kuka-40% kumikhiqizo yeTronsmart
Kusuka kuTronsmart basethula izinketho ezintathu ezihlukile, konke ehlobene nomsindo nomculo, ukuze sikwazi ukusizakala ngamadili amadili wokuzalwa we-Aliexpress. Zimbalwa izikhathi lapho singathola khona lapho singathenga khona imikhiqizo yekhwalithi efakazelwe ngalezi zintengo ezinhle kakhulu. Uma ufuna ama-headphone angenantambo noma isipikha se-bluetooth, ungaphuthelwa yithuba.
I-Tronsmart Onyx Ace
Abanye Ama-headphone we-TWS (True Wireless Sound) anomklamo oqaphe kakhulu Banikela ngobuchwepheshe bamuva bokuyisa umuzwa wokulalela ezingeni elilandelayo. Sibonga u I-Qualcomm chip kwenzeke ukuthola ifayela le- ikhwalithi yomsindo engcono kanye nokuxhumeka okusheshayo nokuzinzile. Bafaka umshayeli okhulisiwe we-13mm kangcono kunama-AirPod ayi-10mm.
Sithola ubuchwepheshe kusuka ku- ukukhanselwa komsindo ngomuzwa omnandi womculo ngaphandle kokuphazanyiswa kwangaphandle kuhlanzeke kakhulu. Ngenxa yokufunda ukusebenza kahle kwamandla ukuzimela kwayo, ngenxa yecala layo lokushaja, kuyakwelula Amahora angama-24 wokudlala kabusha. Ukuzimela okuningi ngalawa mahedfoni ukuhambisana nathi usuku lonke.
Bala Izilawuli zokuthinta ukuze sikwazi ukulawula ukudlala komculo ngaphandle kokuthi ukhiphe i-smartphone yakho ephaketheni lakho. Ngaphezu kwalokho, singazisebenzisa ngokuzimelaKokubili kokulalela umculo nokukhuluma ocingweni ngefomethi ye- "mono". Sibona kanjani enye indlela yangempela kuma-AirPods ukuthi ngenxa yesikhumbuzo seminyaka eyi-10 ye-Aliexpress sizokwazi ukukuthola ngo-50% wentengo yayo ejwayelekile.
Oda amahedfoni wakho we-Onyx Ace wesaphulelo lapha ku-Aliexpress
I-Tronsmart T6 Plus
Inketho yesibili yile isikhulumi esikhetheke kakhulul, iTronmart T6 Plus. Isipikha esihlanganisa izici ezimbili eziyinhloko esivame ukuzifuna kugajethi yalolu hlobo; amandla nosayizi omncane. Ukuhlanganisa lokhu ne idizayini emisha emile ukuze umculo uzwakale kuzo zonke izinkomba umphumela uthokozisa.
Izici zeTronsmart T6 Plus kufika ku-40W amandla. Ngaphandle kokungabaza, ngaphezu kwamandla anele ukujabulela ngokugcwele umculo owuthanda kakhulu noma kuphi endlini. Futhi ukuthi ezindaweni ezivulekile kuzophinde kube nokuningi ukusho. Ama-bass azizwa ejulile impela. Nathi sinawo amathuba okulingana ukuze kuzalwe kabusha, ngokobulili, yiyona engcono kakhulu.
Enye yemininingwane abasebenzisi abathanda kakhulu ukuthi nayo ibalwa ngobuchwepheshe be-TWS. Ukuze singazibhangqa nezinye izipikha ezihambisanayo ngomsindo ohamba phambili wesitiriyo. Ngaphezu kwalokho, ngeTronsmart T6 Plus futhi ungaqalisa futhi usebenzise umsizi wezwi wedivayisi yakho. Isipikha esinemisebenzi eminingi ongasithenga ku-Aliexpress ngesaphulelo esingu-43%.
Lapha ungathenga isipikha se-T6 Plus ku-Aliexpress ngesaphulelo esikhulu
Yethulwe ekupheleni kuka-2.019, ezinyangeni ezimbalwa ezedlule saba nenhlanhla yokuzama futhi enze ukubuyekeza okuthakazelisa kakhulu. Ngemibiko emihle kakhulu evela kubasebenzisi abanqume ukuyithenga, iTrunmart's Spunky Beats ithole idumela elihle. Banefayela le- i-chip yakamuva ye-Qualcomm yemakethe enikezayo isivinini sokuxhuma esizinzile nokusebenza.
El Ikhodekhi ye-Qualcomm aptX esetshenziswe yiSpunky Beat, nikela nge- umsindo wekhwalithi ofana nowe-CD. Okuthile okwenza isipiliyoni somsebenzisi sanelise kakhulu. Amandla evolumu, ikhwalithi yomsindo, ukukhanselwa komsindo futhi ukuzimela okuhle izizathu ezanele zokuba ube nentshisekelo kuwe. Futhi, ngenxa yesikhumbuzo se-10th se-Aliexpress ungabathola ngesaphulelo esimangalisayo esingu-70%.
Lapha ungathenga iSpunky Beat ku-Aliexpress ekwenyuseni
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Amadili weTronsmart wesikhumbuzo se-10th se-Aliexpress
Le yiXiaomi Mi 10 Pro nayo yonke imikhiqizo emisha sha